Julọ Montjuic - Ebe ewusiri ike na Barcelona | Njem zuru oke
El Julọ Montjuic Ọ bụ ebe ndị agha wusiri ike na obodo Barcelona. Karịrị nke ọma na ugwu Montjuic. Ọ bụ ihe nketa akụkọ ihe mere eme, ebe ọ bụ na ebe a na-achịkọta ihe dị mkpa na ihe dị iche iche n'ime akụkọ ihe mere eme nke Barcelona.
Na mgbakwunye na nke a, nakwa nke ya ihe owuwu na ihe niile ebe a na-enye anyị bụ nleta dị mkpa. Ọ bụ ezie na o nweela mmezigharị oge niile n'akụkọ ihe mere eme ya, ha jisiri ike ịnọgide na-enwe amara, ma na nnukwu ụlọ n'onwe ya na n'ubi ya. Ka anyị mee njem zuru ezu na ya!
1 Otu esi aga Montjuic Castle
2 Nyochaa nke akụkọ ihe mere eme nke Castle
3 Akụkụ mejupụtara Montjuic Castle
3.1 Akwa na ntinye
3.2 The bastions
3.3 Na Nme ala
3.4 Ofel na ụlọ elu ahụ
3.5 Na hornabeque
4 Oge ileta Castle nke Montjuic
5 Ọnụahịa nke tiketi na nnukwu ụlọ
Otu esi aga Montjuic Castle
Iji rute ebe a, anyị ga-aga rịgoro ugwu Montjuic. Anyị nwere ike iji ụgbọ ala ndị ọzọ ma ọ bụ bọs ma ọ bụ ikekwe mee njem. Ọ bụrụ n’ịchọrọ iburu ụgbọ ala gị gaa na nnukwu ụlọ, ị ga-enwe nhọrọ nke ogige ụgbọ ala ọha nke nwere nnukwu ikike.
Ọ bụrụ na, n’aka nke ọzọ, ị họrọla njem ọha, mgbe ahụ ị kwesịrị ịma na ị ga-ahọrọrịrị ahịrị 150, nke na-apụ Avenida Reina María Cristina, rute na nnukwu ụlọ. N'aka nke ọzọ, ị nwere ụgbọ ala USB nke si na Avenida Miramar pụọỌ nwere nkwụsị atọ na njedebe ya dị na nnukwu ụlọ. Site na ọdụ ụgbọ ala USB, ọ bụrụ na ị na-eje ije, ị nwere ihe dịka nkeji 20 n'ihu gị, na-agụta na ịrịgo dị elu ma dịtụ elu.
Nyochaa nke akụkọ ihe mere eme nke Castle
N’ebe a akpọrọ aha nke nnukwu ụlọ bụ, e nwere ihe mbido, nke na-abụghị ụlọ nche. Ugbua na afọ 1640, mgbidi mbụ, ka anyị kwuo na ọ ga-adịru oge, nke ejiri okwute na apịtị wuo. Na 1751, e nyere ya iwu ịkwatu ụlọ ahụ ma nye ya ụdị ọhụụ yana ọrụ ndị ọzọ dịka moat ma ọ bụ mmiri ọ drinkingụ drinkingụ. Ka ọ were na narị afọ nke iri na asatọ, ọ na-amaliteworị n'ụdị anyị maara taa. Na mgbakwunye, a kwadebere ya na ọtụtụ cannons. Ma obere oge mgbe nke ahụ gasịrị, ndị agha Napoleon ga-abịarute iji kwakọrọ ógbè ahụ. Dị ka ọ na-adịkarị na ụdị ebe a e wusiri ike, a gbanwekwara ya ka ọ bụrụ ụlọ mkpọrọ na kama ịgbagbu ya.
Akụkụ mejupụtara Montjuic Castle
Eziokwu bụ na ebe a anyị ga-achọta akụkụ dị iche iche, mana ha chọrọ ibe ha. Ya mere, nleta anyị ga-ezu mgbe anyị hụrụ onye ọ bụla n'ime ha.
Akwa na ntinye
Ga-agafe ya mmiri nke Santa Eulalia iru na nnukwu ulo. Eziokwu bụ na anyị ga-eme ya site na akwa mmiri nke ụdị ụdị arches na-akwado nke ogige ahụ. Anyị ga-ahụ ọnụ ụzọ mbata neoclassical nwere ogidi abụọ. Mgbe anyị gafesịrị ọnụ ụzọ, anyị hụrụ ọwara nwere ibo ụzọ abụọ, ka anyị wee banye n'ụgbọ mmiri abụọ. Otu n'ime ha na-akpọrọ anyị na Sant Carles bastion na nke ọzọ Santa Santa.
N'otu aka anyị nwere nke Obinna Okeke, nke dị n'akụkụ ọwụwa anyanwụ nke nnukwu ụlọ ahụ. Ọ bụ otu nke pere mpe ma kee ya site na ncha, yana atụmatụ pentagonal. E nwekwara nke dị na Santa Amalia, nke nwere oghere sitere na ebe enwere ike ịgba egbe. Baslas Velasco buru ibu ma chee ihu na Ndagwurugwu Llobregat. N’ikpeazụ anyị ga - ahụ Llengua de Serp bastion, akpọrọ aha ya.
Na Nme ala
Ọ bụ akụkụ anọ na oghere, nke dị n'akụkụ kachasị elu nke nnukwu ụlọ. Ọ na-emechi ekele maka veranda nke ejiri arcades gbaa ya gburugburu. N’ime ha ka ị ga-esi hụ ụlọ ndị ahụ e nyere n’iwu, ebe ọ bụ ndị gọvanọ ma ọ bụ ndị ọchịchị bi na ya.
Ofel na ụlọ elu ahụ
Otu n'ime ihe ndị kachasị elu nke nnukwu ụlọ ga-ahapụ anyị nnukwu echiche panoramic. Ọ dị n'akụkụ elu nke ala ahụ. A ka nwere ụlọ nche, ọ bụ ezie na emezigharịrị ya.
Anyị enweghị ike ichefu mpaghara ọzọ anyị ga-agarịrị. A na-akpọ ya hornabeque na ọ bụ otu ụdị ụdị ihe nchebe na-eme ka nkewa n'etiti ha abụọ nnukwu ụlọ. N’ebe a anyị nwere ike ịhụ ụzọ kpuchie, mpaghara Santa Elena moat na kwa ravelin ahụ, nke dị n’ime nnukwu mmiri.
Oge ileta Castle nke Montjuic
Mgbe ị matachara ozi a niile, ọ bụ ihe ezi uche dị na ya na ịchọrọworị ịhụ ebe a na onye mbụ. Ọfọn, maka nke a, ịkwesịrị ịma nhazi oge:
Site na November 1 ruo February 28 - Ọ na-emeghe site na Mọnde ruo Sọnde site na elekere iri nke ụtụtụ ruo elekere isii nke ụtụtụ.
Site na Machị 1 rue Ọktọba 31 - Ọ ga-emeghekwa na Mọnde ruo Sọnde mana site na elekere iri nke ụtụtụ ruo elekere asatọ nke abalị.
Whenbọchị mgbe emechiri Montjuic Castle bụ Jenụwarị 1 na Disemba 25. Enwekwara ụbọchị ole na ole bụ ọnụ ụzọ mepere emepe: ma Febụwarị 10 na Mee 18 na Septemba 24.
Ọnụahịa nke tiketi na nnukwu ụlọ
Tiketi nwere ike zụta na nnukwu ụlọ onwe ya Ma ọ bụ, n'ịntanetị na saịtị gọọmentị. Eziokwu bụ na a na-atụ aro nhọrọ nke abụọ a iji zere ahịrị ndị dị na mbụ na mbụ. Yabụ ọ bụrụ na ị gaa njem ebe a ma ịchọrọ ịkwụsị, ọ ka mma ka ịnwe tiketi gị n'aka.
Ọ bụrụ na nleta gị bụ n'efu, mgbe ahụ ọ ga-enwe ọnụahịa nke euro 5. Ọ bụ ezie na enwerekwa mbelata ego nke euro atọ. Agbanyeghi na Sọnde site na elekere atọ na kwa Sọnde mbụ nke ọnwa, nnabata bụ n'efu.
N'aka nke ozo, oburu na ichoro a eduzi na sook ya niile akụkọ ihe mere eme, ịmụtakwu banyere ebe ndị na-adịghị emeghe ka ọha na eze, mgbe ahụ ọ ga-enwe price nke 9 euro. Ọ bụ ezie na ọnụego belatara ga-abụ euro 7. Mgbe anyị na-eche ụbọchị nke nnweta n'efu, njem nleta na-aga n'ihu na-ebelata na euro 4. N'ezie, ma n'ụtụtụ ma n'ehihie e nwere ọtụtụ awa na onye ọ bụla n'ime ha ga-eme n'asụsụ dị iche.
Mgbe anyị na-ekwu maka belata ọnụegoNke a bụ ọnụego maka ndị nwere akwụkwọ ikike maka ibe nke onye nwere nkwarụ, ma ọ bụ ndị na-ejide kaadị pink belatara ma ọ bụ kaadị pink na-enweghị ego. A ghaghi icheta na mpaghara niile nke nnukwu ụlọ ahụ nwere ike ịnweta onye ọ bụla, belụsọ akụkụ elu nke ị ga-eji steepụ gbagoo. A na-ahapụkwa nkịta nduzi n'ime ogige niile.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Njem zuru oke » Julọ Montjuic
Kit ịlanarị na njem gị: Ihe ị na-agaghị atụ uche